Costa Rica inogadza Gurukota idzva rezveKushanya: María Amalia Revelo Raventós
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » vanhu » Costa Rica inogadza Gurukota idzva rezveKushanya: María Amalia Revelo Raventós
Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Costa Rica Kupwanya Nhau • Hurumende Nhau • nhau • vanhu • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Dai 17, 2018
Mutungamiri achangosarudzwa weCosta Rica, VaCarlos Alvarado Quesada, vasarudza María Amalia Revelo Raventós segurukota idzva rezvekushanya, vachitsiva VaMauricio Ventura semukuru wedhipatimendi.
María Amalia Revelo anobata dhigirii raTenzi muBusiness Administration kubva kune rakakurumbira INCAE Bhizinesi Chikoro uye dhigirii reBachelor mu Statistics kubva kuYunivhesiti yeCosta Rica. Anozvirumbidza pamusoro pemakore makumi mana 'ruzivo mune yekushanya kwenyika, uko kwaakabata chinzvimbo chakati wandei chepamusoro mutoro mune ese ehurumende nemasangano akazvimirira. Aive zvakare Mutevedzeri maneja uye Kushambadzira Director kuCosta Rican Tourism Board (ICT), kwaakagadzira nekushandisa nzira dzakakosha dzekushambadzira kusimudzira indasitiri yekushanya muCosta Rica.
Pakati pezvaanokoshesa seGurukota rezveKushanya pane kusimudzira makambani ari pakati nepakati uye madiki; kuvandudzwa kwenzvimbo nyowani dzemunharaunda uye zvigadzirwa, zvine tarisiro yakakosha patsika uye gastronomy; nekusimbisana kwebasa rekubatana pakati pehurumende nehurumende. Sustainability ichave chikamu chemuchinjikwa mune zvese zvaanoita muUshumiri. Uye zvakare, achashandawo pakuisa Costa Rica senzvimbo inokwezva kune indasitiri yeMICE (ikozvino nzvimbo yeConferensi yenyika yavhurwa) uye pakukwezva nzira dzendege dzinoenda munyika.
Nguva pfupi kusati kwasarudzwa, María Amalia Revelo akabata chinzvimbo cheCommerce Director uye Advisor kuAeris Holding, kwaaitarisira kugadzira nzira nyowani dzendege nekukwezva ndege kuJuan Santamaría International Airport (San José) naDaniel Oduber Quirós Aiport (Liberia) .
Gurukota idzva rezveKushanya rakatorawo chikamu chinoshanda mumibatanidzwa yemasangano nemasangano ari mumasangano akazvimirira eCosta Rica. Aive nhengo yemabhodhi evatungamiriri kuNational Chamber of Tourism (Canatur), Chikamu Chitsauko Costa Rica, Association of Professionals in Tourism (ACOPROT) uye Musangano uye Incentives Association.
María Amalia Revelo akagamuchira mimwe mibairo yakakosha panguva yese yebasa rake muCosta Rican chikamu chekushanya, kusanganisira EXPOTUR's "Best Promoter" muna 1987 uye "Pioneering Woman in Tourism" muna 2007.
Chiitiko cheRevelo uye basa raunza tarisiro huru uye kuvimba mukati meCosta Rican chikamu chekushanya. “Tinofara zvikuru nekusarudzwa kwaMaría Amalia. Tinoziva kuti anoshanda zvakadii, saka tine chivimbo chekuti ruzivo rwake rwakakura muindasitiri rwuchabatsira zvakanyanya kusimudzira nekuvandudza kushanya munyika, "akadaro Sary Valverde, Mutungamiri weNational Chamber of Tourism (Canatur).